Ithegi: Itekhnoloji | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 30, 2021 NgoMvulo, Matshi 29, 2021 UJeff Kupietzky
Kunyaka ophelileyo bekunzima kubavakalisi. Ngokunikwa isiphithiphithi se-COVID-19, unyulo, kunye nengxwabangxwaba yezentlalo, abantu abaninzi basebenzise iindaba ezininzi kunye nokuzonwabisa kulo nyaka uphelileyo kunanini na ngaphambili. Kodwa ukuthandabuza kwabo kwimithombo yokubonelela ngolwazi kuye kwafikelela kwinqanaba eliphezulu kakhulu, njengoko isantya esinyukayo solwazi olungelulo luye lwatyhala ukuthembela kwimidiya yoluntu kunye nakwiinjini zokukhangela ukurekhoda. Ingxaki inabavakalisi kuzo zonke iintlobo zomxholo onzima
UkuBopha amaXesha angazange abonwe ngokutsha ukuze uNdle indlela esiSebenza ngayo
NgoLwesibini, Agasti 25, 2020 NgoLwesibini, Agasti 25, 2020 UAdrian Chang
Kukho utshintsho oluninzi kwindlela esisebenza ngayo kwiinyanga ezidlulileyo kangangokuba abanye bethu abanokungaziboni kwangoko iindidi zezinto ezintsha esele zifumene umphunga phambi kokuba ubhubhane wehlabathi uhlasele. Njengabathengisi, itekhnoloji yasemsebenzini iyaqhubeka nokusisondeza njengeqela ukuze sikwazi ukubanceda abathengi bethu kula maxesha oxinzelelo, nangona sihamba kwimiceli mngeni kubomi bethu. Kubalulekile ukunyaniseka kubathengi, njengoko